Soomaaliya oo 40 sano kadib marti gelisay tartanka feerka - Halbeeg News
MUQDISHO(HALBEEG)- Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay qabatay tartanka feerka tan iyo 1978-kii markaa oo aheyd xilligii ugu danbeeyay ee tartankani lagu qabto Soomaaliya.
Kadib dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya feeryahanno kala duwan ayaa dalka isaga cararay sababo la xiriiray amni darro. Tartanka feerka ee Muqdisho lagu qabtay waxa uu soo jiitay indhaha dad fara badan oo ku nool gudaha dalka, kuwaa oo ay kamid yihiin dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada xiiseysa ciyaaraha.
Cawil Geelle Axmed, guddoomiye ku xigeenka xiriirka tartanka feerka Soomaaliya ayaa soo dhoweeyay qabsoomidda tartankan wuxuuna ballan qaaday in ay tartansiin doonnaan feeryahannada cusub.
“Sababta aan u abaabuleyno tartanka feerka 40 sano kadib waxa ay ka tarjumeysaa xaqiiqada ah in uu dalku soo hagaagayo, hadii ay ahaan laheyd dhanka siyaasadda iyo dhanka ammaanka, waxa aan isleeyahay waxaa jira isbedel dhab ah” ayuu yiri Cawil Geelle.
Daawadayaasha feerkan ayaa tartanka ku tilmaamay astaan wanaagsan oo ka tarjumeysa nabadda iyo is-dhex-galka bulshada.
“ Maanta, waxaan aad ugu faraxsanahay in aan u soo daawasho tago tartankan, waa wax aannu u xiiso qabnay sanado badan waxaana filayaa in feeryahanno fara badan ay ka soo bixi doonaan tartakan” ayuu yiri Maxamed Cabdalla oo kamid ah daawadayaasha tartanka.